यस्तो हुन्छ तपाई हामीले चलाउने फेसबुकको डाटा सेन्टर (भिडयो सहित) | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more
यस्तो हुन्छ तपाई हामीले चलाउने फेसबुकको डाटा सेन्टर (भिडयो सहित)
पुस २५ गते, २०७५ - १३:३३
एजेन्सी । तपाई हामीले खिचेका केही फोटाहरु मोबाइल, पेन ड्राइभ, सिडी वा कम्युटरमा नअटेर कहिलेकाँही हामी हैरानीमा पर्ने गरेका छौं । यस्तै तपाई हाम्रो लत जस्तै बनिसकेको फेसबुकमा राखेका सामाग्रीहरुको व्यबस्थापन कसरी भएको होला ?
तपाईले यो विषय कहिल्यै सोच्नुभएको छ ? तपाई हामीले फेसबुकमा राखेका फोटो तथा अन्य सामाग्रीहरु राख्नका लागी कति ठुलो स्पेश चाहिएला ? तपाई हाम्र ति सामाग्रीहरु फेसबुकले कसरी सुरक्षित राखिदिन्छ र तपाई हामीले चाहेको बेलामा सजिलै उपलब्ध हुन्छ ?
जुन समाग्रीहरुका लागी फेसबुक, गुगल लगायत अन्य यस्ता कम्पनिहरुले डाटा सुरक्षित राख्नका लागी अर्बौ लगानीमा ठुलठुला डाटा सेन्टरहरु स्थापना गर्ने गर्छ । खासमा यो एक प्रकारको उच्च स्टोरेज क्षमता र द्रुत गतिको कम्युटर नै हो । फेसबुकले यस्ता ठुलठुला डाटा सेन्टरहरु स्थापना गरेको छ र तपाई हाम्रा समाग्री सोही स्टोरेजहरुमा सुरक्षित राख्दछ ।
हालसालै फेसबुकले १ खर्व रुपैया लगानी गरेर सिगांपुरमा आफ्नो सबैभन्दा ठुलो डाटा सेन्टर निर्माण गर्न लागिरहेको छ । जहाँ ११ तलाको भव्य भवन हुनेछ भने हजारौंले काम पाउनेछन् ।
हेर्नुहोस् –यस्तो हुन्छ डाटा सेन्टर
पुस २५ गते, २०७५ - १३:३३ मा प्रकाशित